4G Orange : tolotra vaovao ho an’ny fandraharahana ao Antsirabe | NewsMada
4G Orange : tolotra vaovao ho an’ny fandraharahana ao Antsirabe
Tanàn-dehibe fahatelo Antsirabe eto amin’ny Nosy, nosafidin’ny Orange hametrahana tambajotra 4G Orange, nanomboka omaly 3 novambra. Manan-danja lehibe eo amin’ny sehatry toekarena io tanàna io, hita izany noho ny fisian’ny orinasa lehibe maro any an-toerana, sehatry ny fambolena sy fiompiana manome vokatra mamatsy ny ao Vakinankaratra sy maro any ivelan’ny faritra. Isan-karazany ireo orinasa madinika sy salantsalany hita ao Antsirabe sy ny manodidina ; manana ny toerany koa ny fizahantany sy ny fitsaboana. Noho izay maha tanàn-dehibe azy izay, nosafidin’ny Orange hampivoarana azy bebe kokoa amin’ny alalan’ny serasera sy ny fifandraisan-davitra.
Singa iray manavao mampandroso sy manamafy ireo sehatra rehetra mampalaza an’Antsirabe ireo ny tambajotra Orange 4G, hahafahana manatsara ny asa, mampitombo ny fidiram-bola, ifandraisana bebe kokoa sy haingana eto an-toerana sy any ivelany. Manampy azy ireo amin’ny fifandraisana, indrindra ny any ivelany ny numérique.
Tolotra hitondra vahaolana
Nanatrika ny fotoana nanokafana izany tambajotra izany ireo mpandraharaha ao an-tanàna, liana amin’io tolotra vaovao io. Vonona nandray ny hetahetan’izy ireo sy mpanjifa samihafa, hanolorana tolotra sahaza hitondra vahaolana ho an’ny fampandrosoana amin’ny asan’izy ireo avy Solontenan’ny Orange rahateo. « Manana anjara andraikitra ny fifandraisan-davitra ho an’ny fampandrosoana, amin’ny alalan’ny numérique, manohana ny tsy miankina sy ny fanjakana », hoy ny minisitra tompon’andraikitra, Rakotomamonjy Neypatraiky André.
Nampahatsiahy kosa ny tale jeneralin’ny Orange, Michel Degland, amin’ny fiaraha-miasa eto Madagasikara. Mitondra ny fahaiza-manaony ny Orange amin’ny lafiny fampiroboroboana ny fifandraisan-davitra. Ahitana tombony ho an’ny toekarena sy sosialy manerana ny Nosy izany, raha ny fanamarihan’io tale jeneralin’ny Orange io. Mitohy hatrany rahateo ny fametrahana ny tambajotra 4 G manerana an’i Madagasikara.
Nanatrika ny fotoana ny Préfet ao Antsirabe, Andriantomponera Nalisoa Voahangiarimino ; lehiben’ny faritra Vakinankaratra, Rakotonarivo William sy ireo mpitantana samihafa. Teo ihany koa ny tale jeneralin’ny Artec (Autorité de régulation des technologies de communication), Rakotoarivelo Longin.